En vente actuellement 05/11/2018
Akondro fotsiny dia mahasolo fanafody !
Mitondra voka-tsoa ara-pahasalamana tsy ampoizina ny fihinanana akondro. Azo araraotina tsara rahateo ity voankazo ity, noho izy misy mandavan-taona ary tsy lafo loatra, raha mitaha amin’ny vidin’ny voankazo sasany.
Ireo olo-malaza namaly faty ny olon-tiany…
Rehefa misaraka ny mpifankatia dia misy ilay faniriana te hamaly faty ao anaty ao. Ny an’ireto olo-malaza ireto dia tsy nijanona ho faniriana fotsiny, fa tena notanterahin’izy ireo mihitsy izany ary nisy ny valifaty tena lasa lavitra…
Toy ny ahoana izany mahay mitia ?
Fihetseham-po mahery vaika ny fitiavana ary tonga amin’ny fotoana tsy ampoizina aza, matetika. Sarotra fehezina izy io, nefa dia iainan’ny olombelona rehetra, amin’ny ankapobeny. Manoloana izany ary, ahoana no atao mba tena hahay mitia tokoa ?
Milkshake amin’ny Nutella
Akora ilaina : · Ronono velona ½ l · Vaingana lagilasy 6 · Nutella (sôkôla fanosotra amin’ny mofo) 2 sf · Vovoka kakaô 1sk · Siramamy, araka izay fatra tiana
Ny vehivavy mendrika ho vadina filoham-pirenena…
dia efa samy manana izay heveriny fa ho fidiana ho filoham-pirenena aza ny tsirairay noho ny fitiavana manokana ny kandida iray na ny programan’asany na ny zava-bitany teo amin’ny sehatra samihafa, dia hita fa mampisongadina sy mahatonga ny lehilahy izay lasa filoham-pirenena ho maanana ny maha-izy azy ny vehivavy vadiny.
Ny akora fanadiovana tarehy mety aminao…
Miantoka ny fahasalaman’ny hodi-tava ny fampiasana ny “démaquillant”, noho izy manadio sy miaro azy. Rehefa hifidy azy itony, araka izany, dia tsy azo atao kitoatoa mihitsy, sao hanimba hoditra indray. Fantaro àry ny sokajin-koditrao, dia atoronay anao ny “démaquillant” mety aminao !
Ramatoa nanjavona nandritra ny 6 andro, fa tratran’ny lozam-pifamoivoizana
Efa ho 6 andro no tsy hita popoka sady tsy naharenesan’ny havany vaovao ity ramatoa iray 53 taona, tany Arizona Etazonia.
Zaza 5 taona, nahahinana rongony tao anaty vatomamy
Zazalahikely anglisy iray 5 taona no fanina rehefa avy nihinana vatomamy nangonina avy tamin’ireo mpiara-monina taminy.
Nidina an-dalam-be nanohitra ny herisetra ara-pananahana ny mpiasan’ny “Google”
Nidina an-dalam-be ireo mpiasan’ilay tranon-kala “Google”, ny alakamisy lasa teo. Nahatratra an-tapitrisany izy ireo, maneran-tany, no nanatanteraka ity hetsika ity, taorian’ny nivoahan’ny lahatsoratra iray tao anatin’ny gazety New York Times, tamin’iny faran’ny volana oktobra iny.
Ireo dingana arahina raha hamela heloka
Mba hilaminana sy hitohizan’ny fiainana dia tena ilaina ny mamela heloka. Iaraha-mahalala anefa fa tsy vita mora izany. Ireto ary ny dingana tokony harahina raha hamela olona iray, mba hahamoramora kokoa ny fanaovana izany.
Nanao firaisana ara-nofo tamin’ny olon-tiako aho.
Taorian’izay dia lasa narary valahana foana isan’andro nefa taloha tsy nanao izany. Marihiko fa 2 na 3 andro talohan’io ny ‘’14eme jour‘’-ko fa tsy nalefa tany akory ny tsirinaina.
“Avoine” sy “citron” atao “jus” : 5 andro dia mihena 5 kilao
Mahery vaika ny fiasan’ity zava-pisotro iray ity ary mety hampihena hatrany amin’ny 5 kilao mihitsy, ao anatin’ny herinandro monja. Mitroka tavy mantsy izy ity. Araho ange e !